Nagu saabsan | xirxirida Beyin | warshad bacda cuntada
Kazuo Beyin Paper iyo Caaga Xirxirida Co., Ltd. oo kan ka horeeya uu yahay Xiongxian Juren Paper iyo Caaga Xirxirida Co., Ltd, waxaa la aasaasay sanadkii 1998 bilowgiisii. Ma aanan haysan khad wax soo saar oo wakhtigaas ah, waxaan samayn karnaa xoogaa ganacsi ah. Markuu waqtigu sii socdo, waxaa aad noogu adkaatay inaan damaanad qaadno tayada iyo waqtiga wax-soo-saar haddii aynaan lahayn warshad noo gaar ah. Kadib waxaan go'aansanay inaan dhisno khadad noo gaar ah. Waxaan isku daynay oo aan guuldareysanay marar badan, waxaan la kulanay dhibaatooyin badan, markaan daabacno, midabada marwalba ma noqon karaan kuwa saxda ah ee aan dooneyno; Markaan daaqeyno, qalabka marwalba waa duuduuban yihiin; Markaan jareyno, boorsooyinka marwalba waa la simayaa , Laakiin waligeen kama quusan ugu dambeyntiina waxaan ku guuleysanay kumanaan tijaabooyin ah. Ugu dambeyntii waxaan siin karnaa boorsooyin kaamil ah macaamiisheenna.
Ka dib wax ka badan 20 sano horumar, hadda Beyin xirxirida waxaa loo soo saaray ganacsi wax soo saar leh oo ku takhasusay soo saarista iyo soo saarista bacaha baakadaha rogrogmi kara. Awoodda wax soo saar waxay gaari kartaa 60 milyan oo RMB sannad kasta; 7 aqoon isweydaarsi ayaa lagu dhisay 50 nooc oo ah qalabka hogaaminaya warshadaha oo lagu rakibay. Sida: 9 mishiin daabacan oo midab leh, mashiinno xawaare sare leh iyo mashiinada daboolaya Filimka, qaybinta iyo jarista mashiinada, mashiinada foornada iyo mashiinada kale ee samaynta bacda Mahadsanidiin khadadka wax soosaarka hore, waxaan la kulmi karnaa macaamiisha waxyaabo kala duwan, naqshadeynta iyo baahiyaha daabacaadda
Waxaa jira in ka badan 100 shaqaale oo ka shaqeynaya xirxirida Beyin, 50 ka mid ah waa farsamayaqaano xirfadlayaal ah oo aqoon u leh shahaadada daabacaadda daabacaadda, 10 farsamayaqaano sare ah ayaa horay u qaatay warshadaha baakadaha ee 10years. Shaqaale khibrad leh oo hodan ah ayaa si buuxda u qanciya dhammaan baahida macaamiisha.
Ka sokow, waxaa jira in ka badan 30 iibin wanaagsan oo ku jira Beyin Packing, kuwaas oo ka caawin doona macaamiisha inay xalliyaan dhibaatooyinkooda. Ku qanacsanaanta macaamilku waa dabagalkayaga.Waxaan ka caawin doonnaa qaabeynta macaamiisha, soosaarka iyo rarka, iwm.
Waxaan balan qaadeynaa inaan kaga jawaab celin doono 30mins maalintii, iyo 8 saacadood gudahood waqtiga habeenkii. Waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano xallinta dhibaatooyinka, iyadoo aan loo eegin wax dalab ah ama ugu dambeyn. In ka badan 20 sano, waxaa jira macaamiil dhif iyo naadir ah oo ay naga cawdaan annaga, waxaana kuu ballan qaadi karnaa inaadan ka qoomamayn doonin inaad na dooratay
Kazuo Beyin Paper iyo Caaga Xirxirida Co., Ltd.
Shirkaddayadu waxay u heellan tahay cilmi-baarista bacaha nooluhu karayo
Xirxirida Beyin hada waa horumaro bisil oo xasiloon, waligeen ma hilmaami karno sida aan sida ugu dhaqsaha badan ugu kori karno sababtoo ah taageerada bulshada iyo macaamiisha. Waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican ee aan ugu celin karno bulshada.
Waxaan nafteena u hurnay cilmi baarista ku saabsan bacaha nooluhu karayo, annagoo rajeynayna inaan yareyno qashinka caagga ah ee dhulka yaal. Waxaan isku daynay sanado badan, ugu dambeyntiina waxaan ka helnay masterbatch shirkadda UK ee Welles oo lagu dari karo walxo ceyriin ah sida PE, BOPP, PET, iwm, si looga dhigo bacaha la dahaadhay inay yihiin kuwo baaba'aya. Waxaan kaa caawinaa inaan dad badan ogaano oo isticmaalno qalabkan halkii aan kaheli lahayn qarashka caagagga ah ee caadiga ah, maxaa yeelay waxaan rajeyneynaa inaan ilaashan karno oo aan xasuusan karno bilicda deegaankeenna.
Taas ka sokow, Waxaan daneyneynaa daryeelka bulshada. Waxaan tagnay geracomium marar badan, halkaas oo uu ku nool yahay oday badan oo cidlo ah. Waxaan aaminsanahay taas, in bulsho wanaagsan ay u ogolaato waayeelka qof uu ku tiirsanaado, anaguna waxaan diyaar u nahay inaan qaybteena ku biirino.
Xidhmada Beyin waa shirkad aqoon leh, masuul ah oo qalbi-qalbi weyn. Waxaan diirada saareynaa horumar waara, qancinta macaamiisha maskaxda, iyo daryeelida farxada shaqaalaha.
Diyaar ma u tahay inaad wax badan ka ogaato? Bilaw maanta!
Marnaba ma ilaawno sababta aan u bilaabayno, sidaa darteed waan ognahay halka aan aadi doonno!